भुसको आ’गो जस्तो नेपालमा को’रोना सं’क्रमण फैलिसकेको छ कतिबेला वि’ष्फोट हुछ थाहा छैन ! सबैलाई स’तर्कता रहन आग्रह, – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/भुसको आ’गो जस्तो नेपालमा को’रोना सं’क्रमण फैलिसकेको छ कतिबेला वि’ष्फोट हुछ थाहा छैन ! सबैलाई स’तर्कता रहन आग्रह,
भुसको आ’गो जस्तो नेपालमा को’रोना सं’क्रमण फैलिसकेको छ कतिबेला वि’ष्फोट हुछ थाहा छैन ! सबैलाई स’तर्कता रहन आग्रह,
दैव पनि दु;खीलाई मात्र; जन्माएर ७ सन्तान गुमाइसकेकी महिलाले १६ औं बच्चा जन्माइन्, आमा र बच्चा दुवैको मृ;त्यु
कोरोनाकै कारण आन्तरिक उडान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो